Tabaha Tababarka eey: 45 Khuburo Ey ah ayaa la wadaaga Sirtooda - Featured
Tabaha Tababarka eey: 45 Khuburo Ey ah ayaa la wadaaga Sirtooda
Keenida eyga waa khibrad cajiib ah oo xiiso leh; sidoo kale waa waqtiga ugu fiican ee lagu bilaabi karo tababarkooda.
Toddobaadyadan ugu horreeya waxaa ka buuxa guulo gaar ah, heerarka horumarka iyo waqtiga isku xirnaanta muhiimka ah.
Si kastaba ha noqotee, waxaad u badan tahay inaad la kulanto dabeecad qaylo iyo dhaqan xumo isla markiiba! Ka fikir saxaro, qaniinyo, xanjo, oohin iyo cabaad.
Daryeelka saxda ah (isdhexgalka bulshada, tallaalada iyo tababarka) ayaa muhiim u ah bilahaaga yar ee bilaha ugu horeeya gurigaaga.
Adiga oo ah waalid eey ah waa inaad masuul noqotaa oo aad qaaddaa talaabooyin yar si aad u hubiso inay u noqdaan eey si wanaagsan u dhaqmay.
Waxaan la hadalnay 45 tababarayaal eey xirfadlayaal ah, kuwa hawsha ka shaqeeya iyo khabiiro waxaanna soo koobnay talooyinkoodii ugu fiicnaa si ay kuu siiyaan hagitaan bilaash ah oo ku saabsan korinta eeyaha.
Xor ayaad u tahay inaad nala wadaagto talooyinkeena ku saabsan tababarka eey ada adigoo adeegsanaya lambarka hoose.
Waxaa bixiyay - Dhamaan Waxyaabaha Eeyaha
45 Talooyin ku saabsan Tababarka eey ee khubarada
1. Hubso Xirfadaha Bulsheed ee Wanaagsan
2. Samee Tababar iyo Bulsho si wanaagsan
3. Bulsho ka dhig Eygaaga
4. Waxaad dhahdaa Taliska Mar Kaliya
5. Hubso Kulamada Ciyaaraha Eeyooyinka Kale
6. Kasbashada Amaanadooda oo ay samaystaan ​​Bond
7. U tababbari Ey yar si ay ugu baxaan Musqusha bannaanka
8. Baadhitaan Sida Eydu Wax U Bartaan
9. Dhiirrigelinta sahaminta
10. Eygaaga ayaa kuu baahan!
Soo Jeedinta Tabaha Tababarka Eeyaha
Khuraafaadka Tababarka Eeyaha
Khuraafaad 1. Waa inaad Sugto Eygaaga si ay u Koraan Tababarka Ka Hor
Eeygaaga iyo boorso yar oo Zip-Lock ah oo ay ka buuxaan cunnadiisa cunuga ah meel walba oo aad kari karto kaxayso.
Isbaraan ugu yaraan boqol qof oo kala duwan shanta bilood ee ugu horreysa noloshiisa oo dadkaas ha quudiyaan dawayntiisa.
Isaga qor fasalka xanaanada cunugga ee leh eey yar yar oo ciyaareysa si ay uga caawiso inuu barto xirfadaha bulshada eey u eg doggie iyo xakameynta cadaadiska qaniinyadiisa, ee loo yaqaan 'Bite-inhibition'.
U kaxee meelo badan oo kala duwan oo ka dhig ka bixitaanka mid xiiso leh.
Tababarro badan oo addeecid ah ayaa la bari karaa marka eeygaagu sii weynaado iyada oo aan waxyeello dhab ah la gaarin, laakiin daaqadda bulshada iyo baridda qaniinyada ka-hortagga waa mid aad u yar labadaas shayna waxay inta badan saameyn ku yeelan doonaan dabeecadda eygaaga qof weyn.
Bulsho la’aanta saxda ah la'aanteed eygaaga waxaa laga yaabaa inuu yeesho gardaro ama arrimo cabsi, kuwaas oo aad u adag in la daweeyo hadhow.
Haddii eeygaagu aanu helin tallaalo ku filan oo uu uga difaaci karo cudur, markaa kaxayso marka aad geyso meelaha eyda kale joogeen.
Uma baahnid inaad sugto inaad isaga meel u dhigto haddii aad u qaaddo meel ay xayawaanno kale joogeen ama aad geysid meelo aaney eeyuhu joogin, sida guryaha saaxiibbada - iyada oo loo marayo Caitlin .
Qaadashada eey waa xamuul badan iyo shaqo.
Xusuusnow samir, kalgacal iyo naxariis.
Haysashada xayawaanku waa ballanqaad 24-7 ah. Jacaylka shuruud la’aan ah ee ay bixiyaan waa mid la yaab leh. Laakiin xusuusnow waxay u baahan yihiin xoogaa jiho ah. Isku day tababarkaaga iyo la dhaqankaaga ka dhig mid wanaagsan iyo wax fiican.
Ku dawee tababarka abaalmarinta waa hab fiican oo loo maro.
Raadi tababare leh habab wanaagsan oo aad jeceshahay oo aad ku kalsoon tahay. Waxaad geyn kartaa eeygaaga casharada bulshada, marka iska qor.
Waxaan rajeyneynaa inay ka hadli doonaan su'aalaha ku saabsan qaniinyada eey, wax ku calashaan, tababarka dheriga, tababarka sariirta, iyo su'aalo kale.
Su’aal maleh waa su’aal carrab la ’, sidaa darteed iska weydii. Haddii aadan weydiinin, sidee baad ku ogaan doontaa. Haddii aad doorato fasallo kooxeed sidoo kale waad ogaaneysaa, inaadan keligaa aheyn.
Milkiileyaasha kale waxay marayaan isla wax. Isku day inaad rajo wanaagsanaato Ujeeddo inaad ka dhigto eeygaaga rajo wanaagsan - iyada oo loo marayo Mary Jackson .
Bulsho u yeel cunuggaaga si eygaagu u la kulmo Dad badan oo dad kala duwan ah oo ka soo jeeda qowmiyado kala duwan iyo qaab dhismeedka dadka sida carruurta yaryar, ragga, haweenka iwm.
Eygaaga 'yar' waa inuu la falgalaa dadka iyo wax kasta oo ugub ah sida raacitaanka gaariga, xirashada suunka adoo adeegsanaya ururo wanaagsan.
Cuntadu si aad ah ayey u shaqeysaa maxaa yeelay kulligeen waan jecel nahay cuntada. Taasi waa mid ka mid ah sababaha abaalmarinta tababarayaasha ku saleysan ay cuntada ugu isticmaalaan tababarka.
Dadka badankood waxay sameeyaan waxa ugu yar ee qaawan marka ay timaado la dhaqanka bulshada eey yar.
Maskaxda ku hay in laga bilaabo da'da 3 toddobaad ilaa 12 toddobaad jir, eydu waa sida isbuunyada, oo si fudud wax u barta.
Wixii intaa ka dambeeya xilligan hore ee bulsho-gelinta waxaad la ciyaari doontaa qabsasho - adoo adeegsanaya Almudena .
Dulqaad yeelo, naxariis muuji. Ardaygaagu wuxuu rabaa inuu kaa farxiyo. Xusuusnow inaad joogto ahaato.
Amar hal mar uun dheh, ka dibna muuji jihada si eeygu u fahmo. Ku soo noqoshada amarka 'SIT' 6 X ma samaynayso arday inuu fahmo.
Tababbarka sanduuqa eey si uu uga caawiyo jabka guriga ayaa cadeeyay inay tahay hab guul iyo naxariis badan leh oo lagu baro eeygaaga xakamaynta kaadi haysta.
Weligaa ha u isticmaalin ciqaab ahaan.
Waa in loo adeegsadaa inay tahay aamin, aamusnaan, 'dareen' nooc ah dareemo ku-haysashadaada.
Si dhakhso leh ayuu wax u baran doonaa.
Ma doonayo inuu carro geliyo godkiisa. Labadiinaba waad sii farxi doontaan.
Waxay kaloo ka caawisaa kala-goynta walwalka;
Markuu u yimaado inuu barto oo jeclaado godkiisa, wuxuu dareemi doonaa raaxo aad u badan oo sugaya soo noqoshadaada. Ku bilow inaad isaga dhaafto muddo aad u gaaban. Wuxuu baran doonaa inaad soo noqotid, iyo inaanu ka tegin. Kadib, markaad waqtiga dheereyso, isagu si deggan buu u nasan doonaa wuuna ku farxi doonaa inuu ku arko.
Intooda badan saaxiibkiis noqo. La ciyaar isaga. Ha dareemo inuu kula joogo uu yahay meesha ugu fiican adduunka oo dhan inaad ahaato. Kama qoomameyn doontid! - iyada oo loo marayo Carol Minker .
Sababta koowaad afka eyda (yacni ilkaha saaraan bina-aadamka) kuma filna in ay la ciyaaraan eeyo kale.
Dhaqankeyga la-talinta habdhaqankayga markaan arko cabashadan, eeygu ama waa eeyga kaliya ee guriga jooga ama eeyga kale ayaa aad uga weyn inuu la ciyaaro eeyga.
Markii aan kaxeyno eeyo yaryar oo ka soo jeeda asxaabtooda qashinka ah, waxay wali ku jiraan marxalad horumarineed oo u baahan in afka lagala ciyaaro cannaano kale.
Waxaan kula talin la ciyaaro la-ciyaal kale ama eeyo jilicsan oo da 'weyn 3-5 jeer usbuucii ugu yaraan .
Cayaartu waa inay u noqotaa waayo-aragnimo wax ku ool ah eey yar yar eeyku waa inaanay noqon xoogsheegasho ama loo xoog sheegto.
Kal-fadhiyada ciyaar-hal-hal ayaa haboon, laakiin ciyaarta kooxdu waa inaysan ka badnaan 8 eeyo. Inta lagu jiro kulanka ciyaarta waa inuu jiraa farxad, isdhexgal buunis ah.
In kasta oo ay jiri karto buuq badan iyo xanaaq, iyo xitaa ilkaha oo la isu geeyo, haddana marna waa in uusan dhiig daadan (illaa qof uun ilkaha ilmuhu ka lumeen mooyee) - adoo maraya Michele .
Waxa ugu horreeya ee lagu sameeyo eey waa helitaanka kalsoonidooda .
Sameynta dammaanad ayaa muhiim u ah inaad yeelato xiriir wanaagsan, taas oo ka dhigaysa barashada mid sahlan oo eygaagu weligiin kaa baqin.
Ta labaad waxa ugu muhiimsan in eey la baro sida loo xasillo. Waa muhiim in eeydu ay yeeshaan 'damis damis' markay jaqayaan, alaabta carruurtu ku ciyaaraan ama ay sameeyaan waxyaabo eey.
Waxaan jecelahay inaan wax ku baro nasashada sariirta.
Bulsheynta ayaa sidoo kale muhiim ah, sidaa darteed u qaadida eeyahaaga casharada iyo meelaha lagu xanaaneeyo eeyaha, si ay ula kulmaan ugu yaraan 100 qof oo cusub bil kasta laga bilaabo da'da 2 bilood ilaa afar bilood.
Ugu dambeyntiina, tababarka gurigu waa muhiim; eeyo badan ayaa loo rogaa hoyga si fudud sababtoo ah milkiilayaashu ma yaqaanaan habka saxda ah ee loo maro tareenka, sidaas darteed tababaraha ahaan, seddexdaas waxyaabood ayaan u arkaa inay yihiin kuwa ugu muhiimsan - iyada oo loo marayo Shannon Thier .
Isticmaal jadwalka quudinta 3x ee maalintii oo baro marka aad ka filan karto eeygaaga inuu u baahan yahay inuu tago. Hubso inaadan khaladaad ku helin guriga oo dhan, hays sanduuq yar oo uu ku seexdo waqtigiisa / keeda isla markaana eygaaga ku xir meel ka baxsan qafiska.
Qafisku wuxuu u baahan yahay inuu ku jiro aag cayiman oo ay ku arkaan adiga oo dhex maraya waadna ogaan doontaa ama arki doontaa marka khaladaadku dhacaan.
Waxaad dhahdaa MAYA XAQIIQDA Dibedda oo Eygaaga dibadda u kaxee oo abaalmari isaga / iyadu markay dibadda u baxaan.
Sidan ayaad si dhaw ula socon kartaa eeyahaaga, waxaad siin kartaa alaab cusub oo carruurtu ku ciyaarto, waad la ciyaari kartaa, socodkoodana u kaxee oo waxaad ku celin kartaa qafiskooda dibedda iyagoo wata xadhiggooda.
Hadaad had iyo jeer ku rido qafiskooda cuntada iyo nasashada waxay jeclaan doonaan qafiskooda weligood Waqti xasilloon iyo nabadgelyo haddii aad ku xirto meel ka baxsan qafiskooda waxay u maleynayaan xarig inuu yahay dabeecadda labaad - iyada oo loo marayo Mary Stillman .
Eygu ma aha afar cunug oo lug leh, wuxuu awood u leeyahay xallinta dhibaatada wuxuuna sameyn doonaa wax kasta si uu u helo natiijooyinka uu isagu ama iyadu aaminsan tahay inay u baahan yihiin xilligaas.
Samee cilmi baaristaada sida eydu wax u bartaan iyo aragtida barashada canine .
Eygu waa shay nadiif ah oo hagitaan sax ah ay ku noqon karto wax kasta oo aad ku baratid inay noqdaan.
Raadi caawimaad xirfad leh ka hor intaanay arrimuhu isu beddelin eeyga.
Ey yar ayaa dhashay isagoo garanaya sida loo noqdo eey, waxay buundada geedka ku xirtaa farqiga wada xiriirka aadanaha ee sababa arrimaha iyo guryaha qaarkood. - iyada oo loo marayo Boves Graves .
Waxyaabo cusub ama cabsi leh ku laabo dawooyin oo waligaa ha ku qasbin eeygaaga inuu wax u dhowaado.
Waxaad dooneysaa inay la yeeshaan xiriir wanaagsan waxyaabaha ay la kulmi doonaan.
Waxyaabaha sida faakiyuumka, timo qalajiyaha, dalladaha, koofiyadaha, muraayadaha, waayeelka, carruurta, dhalinyarada iyo dadka waaweyn, dhammaan noocyada eeyaha kale iyo eeyaha.
Ka bilow faakiyuumka la daaweeyo oo hareeraha lagu rusheeyey eeyahaaga u ogolow inuu ku soo dhowaado iskiis.
Ka dhig farxad, iftiin iyo togan. Abaal marin (daaweyn, ciyaar, ammaan, ama wax kasta oo eygaagu ku helo abaalmarin) iyo JAAHIL aanad jeclayn. Dareenka xun (ku qaylida MAYA !, riixitaanka, jilibka laabta, wali waa feejignaan).
Eeyadu waxay qabtaan wixii shaqeeya.
Dabeecadaha ayaa damiya marka la iska indhatiro (yacni markay shaqeyn weydo) - adoo maraya Heather Brown .
Is dul saar xadhig gaaban marka eeydu yartahay.
Diyaar u noqo inaad ku dhawaato gurigaaga si aad u bilawdo eeyku inay ku bilaabaan wadada saxda ah .
Tababbarka guriga, is dhexgalka bulshada iyo barashada xeerarka guriga, eeyahaaga ayaa kuu baahan!
Haddii aadan halkaas joogi karin qorshe ku saabsan shaqaaleynta eeyaha socodka ama weydiiso saaxiib inuu kaa caawiyo.
Eydu waxay toddobaadyada ugu horreeya ee guriga ka caawiyaan dhisidda aasaaska eey faraxsan, kalsooni leh oo edeb leh - iyada oo loo marayo Nancy Schumacher .
11. Baro Erayadaada Ceegaaga
La hadal oo xiriir la yeelo eeygaaga. Bilow inaad ereyada si dhaqso leh u barato. La wadaag wax kasta oo aad awoodid isaga oo ay ku jiraan cuntada iyo u kuurgalida socodka. Isbara baro waxyaabaha maalin walba dhaca. Si tartiib ah u qaado oo ku raaxee goyntiisa - iyada oo loo marayo Roni .
12. Ka dhig Barashada mid lagu farxo!
Ha ku ciyaarin gurigaaga qalafsanaan eeyahaaga. Halkii ciyaar ahaan loo ciyaaro. Sii kubbo yar yar ama dun yar ama bilowga 'kubbadda qaado' 'kaalay' intaad kubbadda ka laadlaadinaysid oo aad afkooda kubbadda ka qaadaysid. Marka ugu horeysa, kubbada dabcan waad soo ceshan doontaa! “Raadi kubbadda’ intaad kubbada ku qarinaysid gacantaada ama dhabarkaaga dambe - iyada oo loo marayo Mary Stillman .
13. Adeegso Hababka Tababar ee Casriga ah
Marka eygaagu u dhaqmo sida aad rabto, waxaad horumarisaa xiriir cajaa'ib leh iyo kalsooni idinka dhexeysa. Raadi tababare adeegsada habab casri ah oo la xaqiijiyay. Ma jirto meel cabsi ama xanuun ah markaad wax baraysid. Ma ahan aadanaha ama xayawaan kasta. Marka talada ugu fiican ayaa ah inaad hesho tababare tababbaran oo kaa caawin doona inaad dabeecadda aad rabto ugu hesho qaab jacayl togan - iyada oo loo marayo Carolyn Lincoln .
14. Ku dhiiri geli khibradaha wanaagsan ee nolosha hore
Bulsho u yeel cunuggaaga si aad uga fogaato dabeecadaha dhibaatada leh ee la xiriira inay ku soo gaadhaan waxyaabo cusub. Eeyo badan oo ku dambeeya hoyga iyo / ama waqti dheer ku qaata in la korsado waa eeyaha leh cabsi ama arrimo siyaado ah oo la xiriira ugu yaraan soo-gaadhista adduunka dibedda inta lagu jiro muddadooda bulsho ee muhiimka ah. Arrimahan way fududahay in laga fogaado khibradaha wanaagsan ee nolosha hore - adoo adeegsanaya Kim .
15. Bulsho ku Noqo Dunida Aadanaha
Bulsheynta ma aha oo kaliya inaad soo bandhigto eeygaaga eeyaha kale, ee sidoo kale waxay u soo bandhigeysaa dadka jinsiyadaha, da'da iyo jinsiyadaha kale. Waxay ku baraysaa gawaarida iyo diyaaradaha iyo doomaha. Waxay ku saabsan tahay in la baro iyaga inay ku dhex noolaadaan adduunkeenna aadanaha - iyada oo loo marayo Amanda .
16. Samir iyo Tababar ku saleysan Bond
Taladayda ugu fiican waxay noqon doontaa samir! Fahmaan inay qaadato waqti, iyo adkeysi. Waqti badan ku bixi sidaad ugu xirmi karto eeyahaaga, una fiiri tababarka ku saleysan Bond. Madadaalo, ciyaaro iyo ciyaaro badan. Horumarinta xiriir adag oo lala yeesho eygaaga oo ku saleysan wax wanaagsan waxay ka dhigeysaa tababarka madadaalo, oo maahan shaqo - iyada oo loo marayo Gretchen .
17. Bulsho wadaag Kahor 20 Toddobaad
Waxa ugu muhiimsan waa BULSHADA. Tan samee sida ugu horreysa ee 6 toddobaad haddii ay suurogal tahay. Marka eeygu 20 toddobaad jirsado, ka dib bulsheyntu way adag tahay in la sameeyo, waana sababta eyda badani u yeeshaan walwal, taas oo u horseedi karta dabeecad aad u falcelin badan - iyada oo loo marayo Catherine .
18. Ey Cilmiga Bulshada Leh Waa Ey Farxad Leh
Waxa ugu fiican ee aad u sameyn kartid eeyahaaga waa inaad ka dhigto mid la wadaago sida ugu dhaqsaha badan. Waxay ubaahantahay in loo bandhigo eyda kale, xayawaanka rabaayadda ah iyo dadka si aysan cabsi u noqon. U kaxee kooxaha kahortaga eey dusha laga ilaaliyo, casharo tababar kooxeed ah, ku soo wareeg xaafadaha, iwm - iyada oo loo marayo Dawn Jansen .
19. U Diyaar Garowga Markuu Eeyahaagu guriga yimaado
Ha sugin illaa aad ka hesho eeygaaga si aad u kireysato tababare! Horay ula xiriir tababare si aad ugu diyaar garowdo marka eygaagu guriga yimaado. Waxaad u baahan doontaa qalab kala duwan, alaabada xayawaanka, cuntada, alaabta carruurtu ku ciyaarto iyo agabyo kale oo loo qaabeeyey cabbirka eeyahaaga. Tababaraha wanaagsan ayaa kaa caawin doona inaad yareyso ubaxyada aad u guureyso guri iyo qoys cusub, maalmaha ugu horreeya ee ka fog hooyga eyga iyo asxaabta qashinka ah, tababarka guriga, isku xirnaanta, adeecida eeyaha, iyo inbadan. Toddobaadyada ugu horreeya waxay muhiim u yihiin horumarka eey. Ka dhig sida ugu fiican iyaga adoo wacaya tababaraha ey cadeynaya - iyada oo loo marayo Carol Harris .
20. Ka Dhig Dareem Amaankooda
Xoogga saar inaad ka dhigto cunugaaga inuu dareemo badbaado. Madadaali maankeeda. U oggolow iyada inay wax doorato. U muuji iyada indho indhayn badan, dhawaq iyo waaya-aragnimo aad kari karto - iyada oo loo marayo Rose Lesnak .
21. Raadso Hanuunin Xirfad Leh
Tani waa marxaladda ugu muhiimsan ee nolosha eygaaga, ka raadi hagitaan tababbar la aqoonsan yahay. Waxaa jira waxyaabo badan oo laga ogaanayo, u sabir naftaada iyo sidoo kale eeygaaga cusub. Labadiinaba waxay baranayaan waxyaabo badan oo cusub markii ugu horeysay - iyada oo loo marayo John Lawrence .
22. Isla Markiiba Bilaw Tababar!
Bulsheynta ayaa loo baahan yahay inay bilaabato maalinta koowaad! Bar eygaaga waxa aad ka fileyso maalinti koowaad una adeegso aaladaha maareynta si aad uga hortagto inay dhibaato galaan. Sii fursad ay ku gaaraan go'aannada saxda ah oo aad u xoojiso si ay ugu qancaan jawaabta saxda ah - iyada oo loo marayo Jodi L Lytle .
23. Eydu Waxbay Baranayaan Markasta
Had iyo jeer xusuusnow in eydu ay wax baranayaan markasta. Abaal mari dabeecadaha aad rabto, maaree dabeecadaha aadan rabin oo hubi in eeyaha uu waayo aragnimo u leeyahay dhammaan waxyaabaha ay nolosha siin doonto - adoo maraya Ken Mccoret .
24. Samirka iyo Joogtayntu Waa Furaha
Sabirka iyo joogtayntu waa furaha. Khibrad kasta oo eydaadu leedahay waa khibrad waxbarasho, markaa u deji inay ku guuleystaan ​​oo u sheegaan eeyaha (sida abaalmarinta) markaad aragto isagoo sameynaya wax aad jeceshahay oo aad niyad jabiso dhaqanka aan loo baahnayn adoo ku beddelaya dhaqan aad jeceshahay - iyada oo loo marayo Julie Cook .
25. Adeegso Xoog Xoog oo Xoojin ah
Raadi qof tababarayaal ah oo adeegsada xoojin wax ku ool ah halkii aad ka isticmaali lahayd xoog ama cabsi gelin. Wax badan ayaad ka baran doontaa dabeecadda canine iyo sida loo tababarto eeygaaga! Himilooyinkaaga ugu horreeya waa inay noqdaan inaad eeyahaaga ka dhigto mid aamin ah, tababbar dheriga iyo ka-hortagga qaniinyada. Toddobaadyada 13-16 ee ugu horreeya waa xilli xasaasi u ah isdhexgalka bulshada ee ha dib u dhigin - iyada oo loo marayo Linda Trunell .
26. Diirada saar Hanuuninta Inaadan xakamayn
Xusuusnow in ay tahay cunug - iyo mid shisheeye oo markaa jira! Xoogga saar hagida, halkii aad ka xakameyn lahayd, kubbaddan qulqulaya. Hel tababare tababbaran, xoog-la'aan ah si uu kaaga caawiyo inaad hagto noolahaan yar ee kugu xirnaan doona adiga si aad ugu dhex wareegto adduunkeena aadanaha waalan! Ha ilaawin inaad GENTLY u bandhigto waxyaabaha ay kula kulmi doonto dunida aadanaha. Tababaraha wanaagsan ayaa kaa caawin doona hawshan - iyada oo loo marayo Lorena Patti .
27. Fasallada Tababarka Aasaasiga ah
Bulshooyinka eey-bulsheedka iyo casharada tababarka aasaasiga ah, oo badanaa la isticmaalo, halka da 'yarta ay yeelan doonto saameyn togan. Hubso in ilmahaaga la siiyay ugu yaraan 2 tallaal oo tallaal ah - iyada oo loo marayo Joy Brewster .
28. Baro Calaamadaha Dejinta
Talada ugu fiican ee aan siin karo markii ugu horreysay eey eyda iska leh waa inay dulqaad yeeshaan oo ay is waafaqaan. Sidoo kale wax ka baro xilliyada koritaanka eey, calaamadaha dejinta iyo tilmaamaha kale ee jirka - iyada oo loo marayo Sarah Koppel .
29. U diyaari Eygaaga Guul
Abuur jawi aad ku hagayso eeygaaga si aad u siiso dabeecado ku habboon ugana fogaato dabeecadaha aan habboonayn. Tani waxay abuureysaa xiriir wanaagsan oo udhaxeeya eey iyo milkiilaha waxayna dejisaa dhaqanno wanaagsan maalinta koowaad - iyada oo loo marayo Maya Jedlicka .
30. Adeegso Fasalka Xanaanada Caruurta
Isqor fasalka xanaanada eey goortii eeydu gaarto 8 ilaa 10 toddobaad si aad wax uga barato muhiimadda is dhexgalka bulshada iyo la dhaqanka - iyada oo loo marayo Don .
31. Abaal Marin Ha Cadaabin
Ku abaalmarinta eeyahaaga si aad wax u qabato si sax ah waxay u fulisaa wax ka badan ciqaabta qaladaadka - iyada oo loo marayo Larry Nelson .
32. Eyga Lama barin karo waxaadan rabin inaad sameyso
Ma bari kartid eeyga waxa aadan rabin inay sameeyaan. Uma dirno caruur iskuulka si ay u bartaan sida aan wax loo qaban - iyada oo loo marayo Kathleen Buckley .
33. Aqoontu Awood
Aqoontu waa awood, baro waxyaabaha kufiican tababarka eey. Had iyo jeer ku dheji xoojinta wanaagsan oo akhri buugaagta khabiirada dabeecada (PhDs, maaha kuwa caan ku ah TV-yada) - iyada oo loo marayo Christine Corda .
34. Gasho Shaqo Adag
Diyaar u noqo inaad shaqada adag geliso 6-da bilood ee ugu horreeya si aad u goosato abaalmarinta arday isku kalsoon oo farxad leh oo aad qaadan karto meel kasta - iyada oo loo marayo Sarah .
35. U Adeegso Tababar Sanduuqa Samirka
Sanduuq ku tababbari eeygaaga; kaliya maahan tababarka dheriga laakiin sabirka iyo tababarka dejinta sidoo kale - iyada oo loo marayo Lisa Bach .
Laga soo bilaabo hubinta xirfadaha bulsheed ee wanaagsan ciyaar iyo is dhexgalka bulshada ilaa dhisida xiriir adag iyo la ciyaarista xiriirka ku saleysan eeyahaaga; tababarida eygaaga markuu yar yahay waa lama huraan.
Hada waa inaad kajawaabi kartaa su'aalahaaga bilowga ah:
Talooyin ku saabsan tababbarka eeyo ku saabsan qaniinyada, calalinta iyo ciyo
Muhiimadda jadwalka tababarka eey
Sidee loo tababaraa oo loo tababbaraa eeyahaaga
Si aan u soo gabagabeyno tilmaamahayaga tilmaamaha korinta, waxaan sidoo kale weydiinay khubaradayada:
Waa maxay khuraafaadka tababarka eeyaha ugu caansan?
Tobankan khuraafaad ayaa kaa caawin doona inaad dib uga fikirto habka aad u tababarayso eeygaaga.
Khuraafaadka caadiga ah ee ku saabsan tababarka eeyga waxay la xiriiraan iyaga oo looga baahan yahay inay noqdaan da 'gaar ah oo lagu bilaabayo tababarka dhabta ah.
Khuraafaadka tababarka eeyaha ugu caansan uguna waxyeellada badan ayaa ah inaad sugto in eeygaaga uu waxyar ka weynaado ka hor intaadan tababarka bilaabin. Horaantii aad bilowdo inaad naftaada wax ka barato tababarka ku saabsan eeyaha sifiican .
Xaaladaha ugu guulaha badan waxaan arkaa inay bilaabayaan inay naftooda wax ka bartaan tababarka kahor inta eeygu xitaa uusan guriga imaan.
Waxaa jira buugaag yaryar oo fantastik ah oo halkaas ku yaal, oo aan ugu jeclahay waa Ey Wanaagsan oo 7 maalmood ah Sophia Yim.
Akhrinta hal ama laba buug kahor inta eygaaga guriga imaanayo waa fikrad aad u fiican.
Inta badan tababarayaashu sidoo kale aad ayey ugu faraxsan yihiin inay sameeyaan la-talin pre-puppy si ay kaaga caawiyaan inaad si sax ah u ogaato waxa laga filan karo marka eeygaagu guriga yimaado.
Tababar ayaa kaa caawin kara inaad u diyaar garowdo sidii aad ula tacaali laheyd caqabadaha caadiga ah ee eey, sida tababarka guriga, calaalinta, sanduuqa tababarka, qaniinyada eeyga, boodboodka iyo ciinka.
Eydu waxay baranayaan laga bilaabo waqtiga aad guriga keentid.
Haddii aadan si miyir qab ah ugu tababbarin ardaygaaga inuu sameeyo waxa saxda ah, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad u baahan tahay inaad saxdo dabeecadaha dhibaatada ee waddada.
Had iyo jeer way fududahay in laga caawiyo eeyahaaga inuu guuleysto iyo inuu isku dayo inuu saxo dabeecadaha aan habboonayn ee caado noqotay - iyada oo loo marayo Sarah Fricke .
Quraafaad 2. Eydu waxay u baahan yihiin inay 6 bilood jir ahaadaan si ay u bilaabaan tababarka
Khuraafaadka ugu tababaran eeyaha ee laga takhaluso ayaa ah in eeydu ay u baahan yihiin ugu yaraan 6 bilood si ay u bilaabaan tababarka. Tababbarka iyo is dhexgalka bulshada ayaa loo baahan yahay in isla markaaba la bilaabo. Haddii eeydu ay ka diiwaangashan yihiin fasal bulsheed wanaagsan oo xoojin ah, baraha ayaa wax badan ka qaban kara ka takhalusidda dhammaan khuraafaadka kale ee ku xeeran tababarka eeyaha - iyada oo loo marayo Jean Kolor .
Quraafaad 3. Filo Ey yar inuu fahmo
Dadka qaarkiis waxay filayaan in eeygoodu ay fahmaan waxa ay tahay inay sameeyaan, iyaga oo aan wakhti u helin inay tababaraan. Tababbarku waa waayo-aragnimo isku xirnaan u leh eeyga iyo qoyska iyo sidoo kale baridda sida aan dooneyno in ardaygu u dhaqmo - iyada oo loo marayo Bet A Smith .
Quraafaad 4. Wareeg Sawir Cabsi
Inay sugaan inta ay ka helayaan DHAMMAAN talaalkooda si ay tababar u bilaabaan. Sida ugu dhakhsaha badan ayaa kafiican! Xilliga ugu muhiimsan ee daabacaadda cabsidu waa laga bilaabo 7-16 toddobaadyada da'da samaynta taas oo ah xilli xasaasi ah oo Bulsho iyo bilaabid tababar - iyada oo loo marayo Cathy Munnier .
Quraafaad 5. Eydu kama bixi karaan guriga illaa tallaallada ka dib
Khuraafaadka eeyaha ugu caansan, iyo mid u horseedi kara arrimaha ugu daran ee xagga dambe ee nolosha eyga, ayaa ah in eey aan loo oggolayn inuu ka baxo guriga illaa dhammaan tallaallada la dhammaystiro - Danicia Ambron-kaaga .
Quraafaad 6. Xaddidnaan Da'da Tababarka
Waxaan aaminsanahay in quraafaadka tababarka guud ee caadiga ahi uu xaddidayo da'da tababarka. Pup wuxuu diyaar u yahay da 'aad u da' yar si uu u barto waxyaabo badan oo kala duwan sida sida loola dhaqmayo dad kala duwan, sida wanaagsan ee loola falgalo marka ay dadku taabtaan meesha ay ka yimaadeen cuntada, iwm. Sidoo kale, eey waligiis ma 'weyna' inuu wax cusub barto ! Haddii aad la jaanqaadayso hababka tababarkaaga, eey da 'kasta ha noqotee wuu baran karaa - iyada oo loo marayo Shawna Hoole .
Quraafaad 7. Ey Eeyaha Waxay Yaqaanaan Bad Behvaior
Khuraafaadka ugu badan ee loo yaqaan 'puppy tababarka' ayaa ah in eeydu ay yaqaanaan markay khalad sameeyeen. Eygu waxay akhriyaan luqaddaada jirka oo haddii aad u muuqato inaad xanaaqsan tahay way kaa kaa fogaan doonaan oo runti ma fahmi doonaan sababta aadan ugu faraxsanayn - iyada oo loo marayo Cheryl Connolly .
Quraafaad 8. Aragtida ku-talintu waa sax
Khuraafaadka xukunku waa kan ugu caansan (uguna waxyeelo badan!) Quraafaadka tababarka eyga da 'kasta - iyada oo loo marayo Melanie Berky .
Quraafaad 9. Tababbarku wuxuu soconayaa Noloshiisa oo dhan
Markaad tababarto, eeyahaaga wuxuu tababaran doonaa inta ka dhiman noloshiisa - adoo adeegsanaya Mallory Robinson .
Quraafaad 10. Dabeecad Xun ayaa Ka Soo Baxday
Eygu waxay ka baxaan OUT dhaqan xumo - Via Katen Widaman
Tababbarka eeyahaaga waa khibrad muhiim ah oo udhaxeysa adiga iyo eeygaaga.
Waxay kaa caawinaysaa inaad abuurto kalsooni, daacadnimo iyo sidoo kale isku xirnaan labadiinaba.
Boondhigan waxaa loo isticmaali karaa tababar casri ah, sixitaanka akhlaaqda iyo saaxiibtinimo noloshiisa oo dhan.
Ha bilaabin goor dambe, hubi inaad isticmaasho tababar ku saleysan wax ku ool ah oo aad dhexgeliso eygaaga inta aad yar tahay si aad uga fogaato qaar ka mid ah khaladaadka tababarka ugu badan iyo khuraafaadka.
Haddii aad hadda bilowday inaad tababarto eeygaaga ama eygaaga cusub, si xor ah inaad noola wadaagto horumarkaaga ama aad weydiiso mid ka mid ah khubaradayada habdhaqanka talobixin gaar ah oo tababar ah adoo adeegsanaya qeybta faallooyinka ee hoose.
Miyuu isku daraa Corgi Alaskan Malamute isku-darka kuugu fiican?
Newfoundland Dog: Tilmaamaha Buuxa ee Nofie Noble
magacyo ka dhigan ruuxa yeyda
magacyada eeyaha dhedig ee waaweyn
maltipoo lagu qasay shih tzu
intee in le'eg ayay u koraan poodles toy